Raveloaritiana Mamisoa · Oktobra 2012 · Global Voices teny Malagasy
Raveloaritiana Mamisoa · Oktobra, 2012
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Oktobra, 2012
Kolombia: Mpanao Gazety Voaraoka Fa Namoaka Lahatsoratra Momba Ilay Orinasan-Tsolika
Amerika Latina 30 Oktobra 2012
Noroahina avy tao amin'ny habaka an-tserasera Kien&Ke ny mpanao gazety kolombiana Daniel Pardo taorian'ny namoahany lahatsoratra iray momba ny faneren'ny orinasan-tsolika Kanadiana Pacific Rubiales amin'ny fampahalalam-baovao tahaka ny W Radio. Maro ny mpiserasera no nitovy hevitra fa famelezana ny fahalalahan'ny mpampahalala vaovao izao fandroahana izao.
Azia Afovoany sy Kaokazy 29 Oktobra 2012
Tamin'ny 7 Oktobra 2012 lasa teo no nitsingerina ny faha-11 taona nisian'ny ady notarihan'i Etazonia tao Afghanistana. Tokony handao ny firenena ny tafika iraisam-pirenena amin'ny fiafaran'ny taona 2014, na dia mbola “tsy tontosa aza ny ady“. Taorian'ny taona maro nisian'ny ady, voatery hiala ny tafika OTAN ary hamindra ny andraikitra ho an'ny...
Etazonia: Tsy Noresahana Nandritra ny Adihevitra Momba Fifidianana Filoham-pirenena Fahatelo sady Farany i Amerika Latina
Amerika Avaratra 28 Oktobra 2012
*Raha hanaraka ny fitantarana teo aloha mikasika ny adihevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana, tsindrio eto sy eto [es]. Lynn University ao Boca Raton, Florida no nandray ny adihevitra fahetelo sady farany momba ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana eo amin'ny filoha Barack Obama sy ny Governoran'i Massachusetts teo aloha, Mitt Romney. Araka ny efa nampoizina, nifantoka momba ny politika...
Meksika: Reny Amerikana Tafovoany Ampikarohana Ireo Mpifindra-monina Tsy Hita Ny Nalehany
Araka ny tarehimarika avy amin'ny Mesoamerican Migrant Movement [es], nandritra ny enin-taona farany teo, manodidina ny 70.000 eo ho eo ireo mpifindra monina [es] nanjavona tao Meksika. Nandritra ny taona maro, nivezivezy manerana an'i Meksika ireo renim-pianakaviana Amerikana Tafovoany manana mpifindra-monina very na nisy naka an-keriny mba hitady ny zanany izay tsy hita popoka raha...